နယ်နင်ဒဏ်ပေးထားသည့် တရုတ်နိုင်ငံသား တစ်ဦးမြန်မာနိုင်ငံ သို့ပြန်လည်ဝင်ရောက် လာ – 23 Channel
ဝိုင်းမော်မြို့နယ် လူဝင် မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အား ဦးစီးဌာနမှ နယ်နင် ဒဏ်ပေးထားသည့် တရုတ်နိုင် ငံသား တစ်ဦး ပြန်လည်ဝင်ရောက် လာသဖြင့် လဝက ဥပဒေပုဒ်မ. ( ၁၅) ၂ အရ သြဂုတ်လ ၁၉ရက်နေ့ တွင် ပြန်လည် အရေးယူ ထားကြောင်းသိရသည်။
ယင်းတရုတ်နိုင်ငံသား သည် ဝိုင်းမော်မြို့ နယ်၊အောင်မြင်၂သစ်တော ကြိုးဝိုင်းတွင် သစ်သျူးဌက်ပျော စိုက်ပျိုးသဖြင့် လဝကမှ ဖမ်းဆီးကာဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် နင်နယ် ဒဏ်ပေးခဲ့သသည့် ၅ ဦးအနက် တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း လည်း သိရသည်။
Credit; Myitkyina News Journal
နယျနငျဒဏျပေးထား သညျ့တရုတျနိုငျငံသား တဈဦး မွနျမာနိုငျသို့ပွနျ လညျဝငျရောကျ လာ
ဝိုငျးမျောမွို့နယျ လူဝငျမှု ကွီးကွပျရေး နှငျ့ ပွညျသူ့အငျအား ဦးစီးဌာနမှ နယျနငျဒဏျ ပေးထားသညျ့ တရုတျနိုငျ ငံသား တဈဦး ပွနျလညျဝငျရောကျ လာသဖွငျ့ လဝက ဥပဒေ ပုဒျမ. ( ၁၅) ၂ အရ သွဂုတိလ ၁၉ရကျ နေ့ တှငျ ပွနျလညျ အရေးယူထား ကွောငျးသိရသညျ။
ယငျးတရုတျနိုငျငံသား သညျ ဝိုငျးမျော မွို့နယျ၊အောငျမွငျ၂သဈတော ကွိုးဝိုငျးတှ ငျ သဈသြူးဌကျပြောစိုကျ ပြိုးသဖွငျ့ လဝကမှ ဖမျးဆီးကာ ဇှနျလ ၂၉ ရကျနတှေ့ငျ နငျနယျ ဒဏျပေးခဲ့သသညျ့ ၅ ဦးအ နကျ တဈဦးဖွဈ ကွောငျးလညျး သိရသညျ။
Previous Article ကားကြုံလိုက် လာသော ကျောင်းသား/သူ (၃)ဦးကို မဖွယ်မရာပြု လုပ်ပြသည့် ယာဉ်မောင်းအား ဖမ်းဆီး အရေးယူ
Next Article (ကျွန်တော် ပုဇွန်ထုပ်ဆိုလုံးဝမစားတော့ပါ)